Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwe-USA neGolden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Kwezomnotho e-USA nge:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela e-USA
● I-visa yegolide eMelika
● Iphasipoti yesibili evela e-USA
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA ngokutshala imali kwizakhiwo nezindlu
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-USA kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngo-Investment e-USA kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha e-USA basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli be-Investment e-USA kunikela ngezinsiza zokuhlala ngokutshala imali e-USA, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali e-USA, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-USA, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshalwa kwezimali e-USA, i-Double Residency ngokutshalwa kwezimali e-USA, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-USA , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali e-USA, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali e-USA, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-USA, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali e-USA, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali e-USA, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali e-USA, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali e-USA, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali e-USA, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali e-USA, ubuzwe nobuzwe ngokutshalwa kwezimali e-USA, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali e-USA, izinhlelo zezomnotho e-USA, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali e-USA, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali e-USA, okwesibili ipasipoti e-USA, izinhlelo zesibili zepasipoti e-USA, uhlelo lwesibili lwephasipoti e-USA, iphasiphothi yesibili yase-USA, ihlala I-ncy nephasipoti yesibili e-USA, ipasipoti yesibili e-USA, ipasipoti yesibili ngokutshala imali e-USA, ipasipoti yesibili yobuzwe e-USA, uhlelo lwesibili lwepasipoti e-USA, ama-passport wesibili e-USA, i-visa yegolide e-USA, ama-visa egolide e-USA, i-visa yegolide izinhlelo e-USA, uhlelo lwe-visa egolide e-USA, i-visa yesibili yegolide e-USA, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide e-USA, i-visa egolide kabili e-USA, ubuzwe kanye ne-visa yegolide e-USA, ukuhlala kanye ne-visa yegolide e-USA, ukuba yisakhamuzi se-visa segolide e-USA, igolide Uhlelo lwe-visa e-USA, izikimu ze-visa zegolide e-USA.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali e-USA ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eMelika ngokuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali: USD 500,000 kuya ku-USD 1 million +
Isingeniso e-USA kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali
Funda kabanzi nge-USA
I-United States, efushanisiwe i-US noma i-USA, iyizwe eliseNyakatho Melika. Ngaphandle kwezifunda ezingama-48 ezihlanganayo ezinezindawo eziphakathi nezwe, i-United States ifaka isifundazwe sase-Alaska, enyakatho ntshonalanga engavamile yeNyakatho Melika, kanye nesiqhingi saseHawaii, maphakathi nePacific Ocean.
Imfanelo ebalulekile ye-United States kungenzeka ihlukaniswe ngokungavamile. Isizwe sibamba ingxenye yedolobha elikhulu kakhulu emhlabeni eligxila njengezindawo ezibanzi ngokuphelele ezingenazo izindawo zokuhlala.
Ukuba khona kwansuku zonke e-USA kusho ukuthi kunezinye izindlela eziningi. Njengoba inendawo engaphansi kwamakhilomitha-skwele ayizigidi eziyi-10, i-USA iyizwe lesithathu ngobukhulu emhlabeni. Yenza i-USA ikhaya lakho elisha futhi uvikele isikhundla sakho sefantasy esimweni osithandayo sase-US. Akunandaba ukuthi uncike edolobhaneni elikhamulayo noma edolobheni elizolile, wonke umuntu uzothola indawo yakhe yefantasy e-USA. Zishiye wedwa ugqugquzelwe abahlali abahlukahlukene base-US: Abafuduki abaningi bahlala kuphi eMelika? Njengamanje yithuba lakho: Yenza iphupho lakho laseMelika lifezeke. I-US Green Card ivula zonke izindlela zesimo! Abantu bakwamanye amazwe base-US bonakele ngesinqumo: Yikuphi kwezingu-50 ezimangalisayo zase-US okungaba ngumqondo omuhle ukuthi uhlale kuzo? IMelika ithandwa ngokuhlukahluka kwayo futhi uma kwenzeka ubusanda kuba lapho - kungaba njengomuntu ovakashele noma ongafundile - uzoqonda ukuthi yini esikhuluma ngayo lapho sisho ukuthi wonke amakhona e-USA ahle futhi ahlukahlukene kangakanani.
Ama-Atmospheres nabantu ngabanye bayashintsha njengoba usuka ogwini olusempumalanga ubheke ogwini olusentshonalanga. Akunandaba ukuthi uyaphi e-USA, uyaqiniseka ukuhlangana nabantu baseMelika abazokuvezela ngentokozo indaba yokuhamba komndeni wabo. Njengoba kukhonjisiwe yi-United States Census Bureau kwakukhona abantu abacishe babe yizigidi ezingama-43.1 (abakhulelwe abangajwayelekile) ababehlala e-United States ngo-2015 futhi babequkethe cishe i-13.5% yabantu base-US. Futhi, ngubani owaziyo, ungahle uvele ngokushesha! Isinyathelo sokuqala sidlulela e-USA kanti esesibili sikhetha lapho udinga ukuhlala khona.
Kunezinto ezimbalwa okufanele wazi ngaphambi kokuthi uqale ufune indlu noma i-condo e-USA. Ekuqaleni, kuyasiza esimweni lapho njengamanje usunomsebenzi ngenxa yokuthi izinga elithile lesinxephezelo sakho lizosetshenziselwa ukufaka e-USA. Olunye lwezinhlobo ezihamba phambili zezincwadi zokuxhumana lungezelele kakhulu kwesinye sezizathu eziningi zase-US. Ngokusebenzisana kwakho nezindawo zokusebenza eziqinisekisiwe eMelika, ungaqonda manje ukuthi wonke umuntu usebenzisa i-imeyili kaningi ngangokunokwenzeka.
I-imeyili ne-Intanethi kwenze kwaba lula kakhulu (futhi kuthengeke kakhulu) ukuhweba imininingwane eminingi. Uma uza eMelika, uzothola ukuthi ama-PC nezinhlangano ze-Intanethi ziyatholakala ngempela ngezizathu eziningi. Empeleni, i-imeyili iba nengxenye ebalulekile emisebenzini yomphakathi yabantu abaningi baseMelika - njengoba bethumela futhi bathola imiyalezo njalo nabathandekayo.
Abanikazi abaningi beGreen Card bahlala nemindeni noma nabangane lapho beqala ukuthuthela e-USA. Ngaphandle kokuthi kungenzeka ucabange ukubheka indlu noma uphahla kuwebhu (ngokwesibonelo ngaphambi kokuya ezifundazweni), kulula kakhulu ukuthola indawo yokuhlala lapho use-USA. Futhi, abaninimhlaba abaningi badinga ukuhlangana nabantu abangaba izakhamuzi zabo by and by and udinga ukubona ukuthi ungahlala kuphi. Ukufuna indawo yokuhlala e-USA kusebenza kangcono uma use-USA.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwe-USA
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA
USD 500,000 kuya ku-USD 1 million +
Imali eyengeziwe ye- i-visa yegolide ye USA
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA
Uhlelo lwe-EB-5 Immigrant Investor
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-USA
Ngokushesha ngaphansi kohlelo
Ngemuva kweminyaka emi-5 yokuphila
Ubuzwe obuBili buvunyelwe izakhamizi zase-USA
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-USA
Kungani ufuna ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-USA
I-USA iyindawo efiseleka kakhulu yokuthuthela kwenye indawo, kokubili ngezinjongo ezizimele nezebhizinisi. Uhlelo lokuhlala-ngokutshala imali olubizwa nge-EB-5 luvumela umfakisicelo kanye nomndeni wakhe ukuthi bathole ikhadi eliluhlaza ezinyangeni eziyi-18-30, kuthi ngemuva kweminyaka emi-4 bathole ukuhlala ngokugcwele. Awudingi ukufakazela noma yimaphi amakhono olimi, ulwazi lwebhizinisi noma imfundo, futhi futhi awudingi ukuthi uhlale endaweni lapho utshala imali khona. Ngemuva kokuba ngumhlali ungahlala, usebenze futhi ufunde noma yikuphi ngaphakathi kwe-USA.
Ukufuduka komndeni e-USA
Kusicelo sakho, ungafaka owakwakho nezingane ezingaphansi kweminyaka engama-21.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-USA
Okokuqala, kufanele uthole iphrojekthi yokutshala imali efanelekile ohlelweni lokuhlala, ubeke imali ku-akhawunti yokungena bese ufaka isicelo. Isinqumo senziwa ezinyangeni eziyi-12-18. Izinhlelo eziningi zibuyisa utshalomali lwakho uma kunqatshwa isicelo sokuhlala. Ngemuva kokuvuma isicelo uzonikezwa i-visa nesimo sakho sokuhlala unomphela phakathi nezinyanga eziyi-6-9. Ekugcineni, ngemuva kokubamba imvume enemibandela iminyaka emibili, ungafaka isicelo sekhadi eliluhlaza.
Izidingo zezezimali ze-USA
Kunezinketho ezi-2 zokutshala imali ngezinjongo zokuhlala. Ungatshala imali esikhungweni sesifunda okungamathuba okutshalwa kwezimali avunyelwe uhulumeni ngezinhloso zokufuduka. Kufanele utshale ubuncane be-USD 500,000, bese wenza okungenani amathuba emisebenzi ayi-10. Ngale nketho akudingeki noma yikuphi ukwengamela okuqondile kwemisebenzi yebhizinisi yansuku zonke.
Inketho yesibili ukudala inkampani entsha okungenani i-USD 1 million, noma i-USD 500,000 ezindaweni ze-rustic ezinesilinganiso esiphakeme sokungasebenzi. Kumele uqashe okungenani abasebenzi abayishumi abaqeqeshiwe base-US, futhi uphathe inkampani ngokwakho.
Ukutshalwa kwemali kufanele kugcinwe iminyaka emine ezimweni zombili. Imbuyiselo nezingozi ekutshalweni kwemali kuncike ngokuphelele emandleni emakethe.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali kwe-USA
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents ase-USA futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli kwe-USA inikeza amaklayenti nemindeni yawo e-USA ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela e-USA, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela e-USA namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela e-USA noma i-Golden Visa evela e-USA noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela e-USA noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshalwa kwezindlu ku-USA, sinikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani I-USA noma i-offshore, izinsiza zabantu e-USA nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwe ekubeni yisakhamuzi e-USA kanye nokuhlala okwesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi Zase-USA:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali Okwe-USA, ngokungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika Okwe-USA, abambi bezimali abafudukela kwamanye amazwe abangabizi kakhulu e-USA, Indawo yokuhlala engabizi ngabacwaningi bezokutshalwa kwezimali e-USA, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali base-USA kanye nenkampani yababizi bokufika kuleli e-USA
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali kusuka e-USA kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eMelika emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka e-USA kuya emazweni angama-37.
Iphasiphothi yesibili esuka e-USA iye emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa e-USA kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela e-USA.
Izinhlelo ze-visa zegolide e-USA emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka e-USA ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela e-USA ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe zisuka e-USA ziye emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngo-Investment of USA ngeReal Estate
Sinikeza ukwesekwa kokutshalwa kwezindlu ku-USA ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali e-USA, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali e-USA. Sibophelene nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa e-USA abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle e-USA, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezinhle kakhulu zokuhlala e-USA ngokutshalwa kwezimali ku-real estate e-USA.
Udinga ukwazi - Indawo yokuhlala yase-USA ngotshalomali
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali wase-USA kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo oluningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali e-USA. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala kabusha ngokutshala imali kuya e-USA zifaka:
Abameli bethu bazoziqonda izidingo zakho zokuthuthela e-USA noma e-USA, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Siqala ngenkuthalo i-Due Diligence, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA kumakhasimende ngokuthola i-Residence Permit yase-USA nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala wase-USA, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili ne-Residency yakho ngokufaka isicelo sokutshala imali e-USA sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngesicelo sokutshala imali e-USA. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali e-USA kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Uma imibhalo yakho neyomndeni wakho ye-Residency ngokufaka isicelo sokutshala imali e-USA seyilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zase-USA.
Lapho isicelo sakho sokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-USA sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali e-USA kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi ase-USA:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali e-USA azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezikhali nezinhlamvu ezivela noma eziya e-USA.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali ze-USA ahlinzekelwa ukubhekwa ngobuchwepheshe e-USA noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya e-USA.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kwe-USA ahlinzekwa nganoma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu e-USA.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali kwe-USA akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic e-USA.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali e-USA akuyona eyamabhizinisi asebenzisana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi e-USA.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kwe-USA akutholakali kubantu base-USA abasebenza ngokuhweba, ukugcina e-USA, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali kwe-USA akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo kwe-USA akuzona ezezinkolo zezenkolo nezokusiza kwazo e-USA.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku USA ayihlinzekwa kubantu abasebenza Izithombe Zobulili Ezingcolile e-USA.
Ukuhlala kwethu abameli e-USA ayisekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa e-USA.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha izinyathelo ezinengqondo ukuze baqinisekise amaphepha e-AML amaklayenti e-USA kanye ne-KYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla e-USA ukuvunywa kwesicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-USA.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokuxhaswa kokutshalwa kwezimali e-USA ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlela izindlu e-USA.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zezomthetho zase-USA, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali e-USA inikela ngamanani ashibhile, ngenani lokuphumelela elingafinyeleleka kangcono e-USA.
Sithathe iminyaka eminingi yesipiliyoni sokuhlala kabusha okumbaxambili e-USA asekela amaklayenti nemindeni yawo e-USA.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bezokutshalwa kwezimali e-USA kanye nabameli bezomthetho base-USA abanikeza ukwesekwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu kanye nabasebenzeli benqubo yokuphatha yase-USA kanye nesicelo abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho e-USA nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu e-USA
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba e-Residency ngokutshala imali kufaka ne-USA, sisiza amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali e-USA kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya e-USA
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali kwe-USA sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende e-USA, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-USA nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa kwe-USA
Inqubo Yemvume Yokusebenza ye-USA
Indawo yokuhlala okwesikhashana e-USA
Indawo yokuhlala unomphela e-USA
Ama-Embasi nama-Consulates ase-USA
Ukuhlala kabusha ngo-Investment e-USA nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka e-USA ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho e-USA ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho we-USA, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini e-USA ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali e-USA, sinikeza ngezamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR nase-USA, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi base-USA abasenza isitolo esisodwa se-USA namazwe ayi-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu, kanye nosomabhizinisi base-USA ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali e-USA ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha e-USA nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani e-USA noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani e-USA zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange e-USA
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela e-USA uzodinga i-akhawunti yakho yasebhange e-USA ne-akhawunti yasebhange yenkampani e-USA, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Ingabe udinga ukubonisana e-USA, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali e-USA njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech e-USA noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze USA uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona e-USA ukuqala okusheshayo e-USA.
Izinsizakalo ze-HR e-USA
Our inkampani yezabasebenzi e-USA ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga post izikhala e-USA free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo ze-USA
Izinhlelo zebhizinisi ze-USA kanye ne izinombolo ezibonakalayo ze-USA Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Izinsizakalo Zokuhlela Kwezezimali e-USA
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele e-USA nase okuningi.
Ikheli lehhovisi elibonakalayo e-USA
Ukusetha ibhizinisi e-USA
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA, isethaphu ibhizinisi ku USA.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi ezise-USA
Ukwakhiwa Kwewebhu e-USA
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano e-USA
Ukuthuthukiswa kwewebhu e-USA
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eMelika
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-USA
Sihlinzeka ngokuhlala kabusha okusemthethweni ngezisombululo ze-Investment ze-USA nokuphumelela kwamakhasimende ethu kubaluleke kakhulu, e-USA, singabaholi, inkampani yethu yezomthetho yase-USA inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika nase-USA, sinedumela lokuletha ulwazi oluhle kakhulu lwamakhasimende e-USA nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu base-USA nemindeni yabo. I-Residency yethu yithimba lokutshala imali lase-USA linikeza izixazululo ezenziwe ngobuhlakani zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala e-USA, lapho imvume yakho yokuhlala e-USA ivunyelwe.
Amandla wommeli wase-USA ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-USA. Uma use-USA noma uhlela ukuvakashela i-USA, singawathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani ye-USA ukude, amandla akho abameli kufanele agunyazwe ngokusemthethweni ukuthi asetshenziswe endaweni yase-USA. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ngabe ligcotshwe noma livunyelwe ngokomthetho yi-consulate yase-USA.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-USA
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshala imali e-USA?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala e-USA ngotshalo-mali emnothweni wase-USA ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali e-USA, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali e-USA kusekelwa indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali e-USA, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-USA, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-USA kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali e-USA, abasebenza kakhulu ezindaweni zokuhlala ngabatshali bezimali e-USA, kanye namafemu abonisana kakhulu nabokufika e-USA.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali e-USA | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali e-USA | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment e-USA | Ukuhlala kabusha ngabameli bezotshalomali e-USA | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali e-USA
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali e-USA?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali e-USA, kungachazwa njengokuthola ubuzwe base-USA ngokutshalwa kwezimali emnothweni wase-USA ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, ibhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll e-USA. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali e-USA, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali e-USA olwesekelwa ubuzwe ngezinsizakalo zokutshalwa kwezimali e-USA, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-USA, ubuzwe obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-USA kanye nokuba yisakhamuzi esihle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali base-USA, abasebenza ubuzwe obuhle ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali e-USA, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika e-USA.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi ze-USA | Ababizi bokufika abafinyelelekayo e-USA | Abameli abangabizi bezimali zokungena kwabatshali bezimali e-USA | Abameli abangabizi bezimali zokungena kwabatshali bezimali e-USA | Ababonisi bezimali abangena mali abangabizi be-USA | Amafemu omthetho wokufuduka afinyelelekayo e-USA
Iyini incazelo yepasipoti yesibili e-USA?
Iphasiphothi yesibili e-USA, ingachazwa ngokuthi, ukuthola izakhamuzi ezisemthethweni zase-USA ngokutshalwa kwezimali emnothweni wase-USA ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, ingcebo, ibhizinisi, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya e-USA, uhlelo lwesibili lwepasipoti lwe-USA olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili ze-USA, ngabameli bethu besibili abahamba phambili be-passport e-USA, abameli bamaphasiphothi besibili abahamba phambili e-USA kanye nabeluleki besibili abahamba phambili be-passport e-USA, abasebenza kuma-passport wesibili angcono kakhulu e-USA, kanye namafemu abeluleka kakhulu ngabokufika e-USA.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili ze-USA | Ama-passport wesibili e-USA | Abameli bepasipoti besibili e-USA | Abameli bepasipoti besibili e-USA | Abaluleki besibili bepasipoti base-USA
Iyini incazelo ye-visa yegolide e-USA?
I-visa egolide e-USA, ingachazwa ngokuthi, ukuthola imvume yokuhlala e-USA ngokutshalwa kwezimali emnothweni wase-USA ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhondi kahulumeni, ibhizinisi, izakhiwo, njll. Izinsizakalo ze-visa zegolide ze-USA, ngokusebenzisa abameli bethu be-visa abasahle kakhulu e-USA, abameli be-visa begolide abahamba phambili e-USA kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa base-USA, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili e-USA, kanye namafemu abonisana nabokufika ahamba phambili e-USA.
Izinsizakalo ze-visa zegolide ze-USA | Ama-visa e-Golden agents e-USA | Abameli begolden visa e-USA | Abameli begolide begolide e-USA | Ababonisi be-visa begolide base-USA
Yiluphi utshalomali oluncane lokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-USA?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshala imali e-USA kungama-USD 500,000 kuya kuma-USD 1 million +.
Ngabe unikeza ukusekelwa okusemthethweni kwe-USA for Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu e-USA kanye nama-ejenti ase-USA ahlinzeka ngokusekelwa kwabahlali ngokutshala imali e-USA.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali kuya e-USA kuyabiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-USA kanye ne-Residency ngezidingo zesikhwama sokutshala imali e-USA zenzelwe abantu ababiza kakhulu, sibiza imali yokubonisana kuphela ye-Residency by Investment to USA, siphinde sinikeze nezinye izisekelo eziningi ze-Residency by Investment solutions.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA noma nge-visa yabatshalizimali e-USA?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo ezokuhlala ngokutshala imali e-USA kusuka e-Asia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA kusuka e-Afrika, ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA kusuka eYurophu, ukuhlala kabusha ngokutshala imali kuya e-USA kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA kusuka eMalaysia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali e-USA kusuka eBangladesh, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-USA kusuka e-Indonesia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-USA kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-USA kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-USA kusuka e-India nase-Residency ngokutshalwa kwemali e-USA kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali kwe-USA
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali e-USA
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for USA
I-Los Alamos National Laboratory
I-National Capital Planning Commission (i-NCPC)
I-Federal Bureau of Uphenyo (i-FBI)
Ikhomishini Yezithuba Zokuqashwa Elinganayo (i-EEOC)
I-National Park Service (NPS)
Umtapo Wezincwadi Kazwelonke Wezolimo
I-Tennessee Valley Authority (TVA)
Inhlangano yesiqinisekiso Sempesheni
Ukuphathwa Kwebhizinisi Elincane (i-SBA)
Insizakalo Yokucwaninga Ngomnotho
Insizakalo Yengeniso Yangaphakathi (i-IRS)
I-Federal Election Commission (FEC)
I-Radio Free Europe / Radio Liberty
Ibhodi Lezokuphepha Likazwelonke (i-NTSB)
I-National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Umsebenzi Wokucwaninga Kwezolimo
Ibhodi Lababusi bohlelo lweFederal Reserve System
Ukuphathwa Kwamandla eSouthwestern
Ucwaningo Lwezokuma komhlaba lwase-US (USGS)
Ukuphathwa Kwezemisebenzi Nokuphathwa Kwezempilo (OSHA)
Inhlangano Kazwelonke Yezimali Ebolekayo (Ginnie Mae)
I-Institute of Museum and Library Services (IMLS)
IHhovisi Lezobulungiswa Izinhlelo (OJP)
IKhomishini Yokulawula Inuzi (NRC)
Umkhandlu Olulekayo Wezokulondolozwa Komlando (ACHP)
Isikhungo Sezesayensi Yezemfundo (IES)
Izinsiza Zenhlanzi Nezasendle
Insizakalo Yokulondolozwa Kwemvelo Yemvelo
ILabhulali Kazwelonke Yezemfundo (NLE)
UMkhandlu Kazwelonke Wokukhubazeka
Ezokuxhumana Kwelizwe Nezokuphatha Ulwazi
I-Sandia National Laboratories
Ibhodi Lokubuyekezwa Kwezobuchwepheshe Benkunkuma (i-NWTRB)
I-Ejensi Yekuhweba Nekutfutfukisa yaseMelika
Inethiwekhi Yezimali Yokuqinisa Ubugebengu (FinCEN)
I-Overseas Investment Agency (OPIC)
Isikhungo Sezokwaziswa Ngezinsiza Kwezemfundo (i-ERIC)
I-United States International Trade Commission (USITC)
I-Federal Laboratory Consortium yeTekhnoloji yokuDlulisa (i-FLC)
Ihhovisi loMqondisi Wezobunhloli Kazwelonke
Ikhomishini Yokubuyekezwa Kwezokuphepha Nempilo Emsebenzini (OSHRC)
Ukuphathwa Kwezokuphepha Kwenuzi Kazwelonke (i-NNSA)
Ukulondolozwa Kwezinqolobane Zikazwelonke kanye Namarekhodi (i-NARA)
Ukuphathwa Kwezikweletu Zabalimi (FCA)
Ibhodi Yezokusakaza Yababusi
I-Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
I-National Mediation Board (NMB)
I-National Endowment yezobuCiko (NEA)
I-Federal Commission Security and Health Commission Commission (FMSHRC)
Isevisi yokuhlola impilo yezilwane nezitshalo
Ukuphepha Kwezimayini Nokuphathwa Kwezempilo (i-MSHA)
Ibhodi Lokutshalwa Kwezimali Lokuthatha Umhlalaphansi we-Federal (FRTIB)
IKhomishani Yezokuphepha Nezokuhwebelana (i-SEC)
I-Y-12 National Security Complex
Izindlu zomphakathi nezamaNdiya (i-PIH)
IHhovisi Lezokuphathwa Kwabasebenzi (i-OPM)
IHhovisi Lokuphatha Nebhajethi (OMB)
IHhovisi Lezimilo Zikahulumeni (i-OGE)
Ihhovisi loMmeli Wezentengiselwano wase-United States (USTR)
Ihhovisi le-Patent ne-Trademark Office
I-Federal Emergency Management Agency (i-FEMA)
Ihhovisi lezokuThengiswa kwezezimali zabasebenzisi
IKhomishini Yezokuphepha Komkhiqizo Wabathengi (i-CPSC)
I-National Endowment for the Humanities (NEH)
I-General Services Administration (GSA)
Isikhungo Senkonzo Yezolimo
I-United States Agency for Development International (USAID)
I-Bureau of Engraving and Phrinta
Isistimu Yenkonzo Ekhethiwe (i-SSS)
Umnyango Wethala Lombuso
Ikhomishini Yezikhumbuzo Zamazwe aseMelika
Ihhovisi leComptroller yeZimali (i-OCC)
I-National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
Ikhomishini Yomngcele Wamazwe Ngamazwe Namanzi
Isevisi sezulu sezulu
Ihhovisi le-Surface Mining Reclamation and Enforcing (OSMRE)
I-Bureau of Transportation Statistics
Inkonzo Kazwelonke Yolwandle
I-Federal Communications Commission (FCC)
Isikhungo Sikazwelonke Samazinga Nobuchwepheshe (NIST)
Ukuphathwa Kwezikweletu Zezwe (i-NCUA)
Ihhovisi Lezokuhlaziywa Komnotho (BEA)
I-US Marshals Service (USMS)
I-United States Postal Service (USPS)
IBhodi Lokuvikelwa Kwamasistimu (Merit Systems Protection Board)
INational Technical Information Service (NTIS)
I-Corporation yeNational & Community Service
I-Voice of America (VOA)
Ubuzwe kanye Nemisebenzi Yezokufuduka
Ukuphathwa Kwezidakamizwa (i-DEA)
I-Federal Trade Commission (FTC)
Ukuphathwa Kwezohwebo Zamazwe Omhlaba (ITA)
U-Lawrence Livermore National Laborator
Izikhungo Zokufundisa Zomthetho Wokuqinisa Umthetho Wokuqinisa
Ikhomishini Yokuhweba Yezinto Ezihamba Ngezinto Nezimali (i-CFTC)
I-Thrift Savings Plan (TSP)
IKhomishane Yokulawulwa Kweposi (PRC)
I-Alcohol and Fodya tax and Trade Bureau (TTB)
I-Bureau of the Fiscal Service
Isiphathimandla Sobudlelwano Kwezabasebenzi (i-FLRA)
Ibhodi Yomhlalaphansi Kajantshi (RRB)
IKhomishini Elawula Amandla Kahulumeni (FERC)
Ihhovisi Lokulawula Izingozi Nezindlu Ezinempilo (i-OLHCHH)
I-Asia Free Radio
I-Bureau of Alcohol, Ugwayi, Izibhamu kanye neziqhumane (i-ATF)
I-Bureau of International Security kanye ne-nonproliferation (ISN)
Intela Yokusebenzisana kanye neDatha yeWebhu (Idatha yokungenisa nokuthekelisa)
I-Bureau of Labor Statistics (BLS)
I-Central Intelligence Agency (i-CIA)
Ukuphathwa Kwezokuphepha Komphakathi (i-SSA)
Isiza somfula iSavannah
I-Federal Aviation Administration (FAA)
I-Federal Maritime Commission
I-National Labour Relations Board (NLRB)
I-ejensi yokuvikela imvelo (i-EPA)
ILabhulali Kazwelonke Yezokwelapha (NLM)
Ikhomishini Yemidlalo Yemidlalo yaseNdiya (NIGC)
Izikhungo Zezempilo Zezwe (i-NIH)
Ukuphathwa Kwe-Oceanic & Atmospheric National (NOAA)
Inhlangano Yezimali Yezimali Yombuso (i-FHFA)
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka Wase-USA , obhekene nokwakha izinqubomgomo zokusheshisa ukuthuthela kwelinye izwe e-USA